‘खलनायक मात्र होइन, नायक भएर पनि खेल्नेछु’ - Dainik Nepal
‘खलनायक मात्र होइन, नायक भएर पनि खेल्नेछु’
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २६ गते ८:१७
थुप्रै फिल्ममा खलपात्रको अभियन गरेका बसन्त तामाङ ‘बादल’ले अभिनयलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा– ९ निवासी बसन्तले म्युजिक भिडियोहरूमा पनि अभिनय गर्दै आएका छन् । बसन्तले विगत १२ वर्षदेखि कला क्षेत्रमा नै व्यतित गरेका छन् । दिलबहादुर तामाङ र रत्नमाया तामाङका कान्छो छारो बसन्तलाई नायक भएर अभिनय गर्नुभन्दा खलपात्रमा अभिनय गर्न मन पर्छ । उनले अहिलेसम्म ‘उफ् यो मन’, ‘नेप्टे’, ‘मट्टीमाला’, ‘फिर्के’, ‘रुद्राक्ष’, ‘तोरी लाहुरे’, ‘आँधीतुफान’ जस्ता थुप्रै फिल्ममा बसन्तले खलपात्रको रुपमा अभिनय गरिसकेका छन् । कुशल अभिनेता बन्ने सपना देखेका बसन्तले आगामी दिनमा राम्रो अभिनय गर्ने योजना रहेको सुनाए । बसन्त तामाङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :–
अहिले कुन फिल्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
– ‘मट्टीमाला’ फिल्ममा व्यस्त छु । यो फिल्ममा खलपात्रको अभिनय गरिरहेको छु । फिल्मको छायाँकन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ ।
हालसम्म कुन–कुन कलाकारसँग काम गर्नुभयो ?
– नाम चलेको थुप्रै कलाकारसँग अभिनय गरेको छु । सबैसँग काम गर्दा राम्रो अनुभव छ । सबैले सहयोग गर्नु भएको छ ।
कुन कलाकारसँग काम गरौँ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
– दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, आर्यन सिग्देल जस्ता कलाकारहरूसँग काम गरौँ जस्तो लाग्छ । दयाहाङ र आर्यन जस्ता राम्रा कलाकारसँग काम गरिसकेको छु । सौगात मल्लसँग काम गर्ने मौका पाएको छैन । उहाँसँग काम गरौँगरौँ लाग्छ ।
यी नाम चलेका कलाकारसँग काम गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ ?
– अभिनय गर्दा मजा आउँछ । उहाँहरूसँग काम गर्नको मज्जा नै अर्कै छ । धेरै कुरा सिक्न पनि पाइन्छ ।
प्रेम प्रस्ताव कत्तिको आउँछ ?
– त्यस्तो धेरै त होइन । बेलाबेला यसो जिस्काउने गरेका छन् । म आफ्नो कामप्रति इमान्दार भएकोले त्यतातिर धेरै ध्यान दिएको छैन ।
नायक पनि बन्ने कि खलनायक मात्रै बनिरहने ?
– अभिनय जे गरे पनि हुन्छ । नायक बनेर वा खलनायक बनेर जसरी अभिनय गरे पनि दर्शकको मन जित्न सक्नु पर्छ । काम गर्दा यो वा त्यो भनेको छैन । तर, अलिक धेरै मजा खलपात्रमा गर्दा आउने गरेको छ । हेरौँ भविश्यमा के–के हुन्छ ।
तपाई त म्युजिक भिडियोमा पनि खेल्नु हुन्छ है ?
– हो खेल्ने गरेको छु । म्युजिक भिडियोमा पनि काम गर्न रमाइलो हुन्छ । म्युजिक भिडियो थुप्रै गरेको छ ।
तपाईको ज्यान नायक भएर फिल्ममा खेल्ने जस्तो रहेछ । कसरी बनाउने यो यस्तो शरीर ?
– अभिनय गर्न म कुनै विषयमा पछि पर्दैन । राम्रा प्रस्तावहरू आए भने नायक भएर खेल्न कुनै अपात्ति छैन । अहिले मलाई नायकभन्दा पनि खलनायकका रुपमा दर्शकहरूले चिन्नु भएको छ । भविष्यमा नायक भनेर पनि चिन्नु हुनेछ ।
जहाँसम्म शरीरको कुरा छ । मैले बिहान बेलुका समय पाउनेवित्तिकै व्यायामहरू गर्छु । फिल्ममा खेल्ने इच्छा राखेपछि शरीर त बनाउनै पर्‍यो नि ।